दाङका ६ गाउँपालिकामा मतगणना शुरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
दाङका ६ गाउँपालिकामा मतगणना शुरु
असार १५, २०७४- दाङका ६ गाउँपालिकामा मतगणना शुरु भएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकामा मतगणनाको तयारी भैरहेको छ । बबई गाउँपालिकामा केही विवाद भएकाले मतगणना शुरु हुन सकेको छैन ।
हालसम्म राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका एक/एक वडामा माओवादी विजयी भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. ९ मा वडा अध्यक्षसहित सबै सदस्यहरु माओवादी केन्द्रले जितेको छ । वडाअध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रिम बहादुर सुनारी मगर २ सय मत ल्याएर विजयी भएका छन् । वडा अध्यक्षमा काँग्रेसले १ सय ५२ र एमालेले ६४ मत प्राप्त गरेको थियो ।
यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको वडानं. ८ मा माओवादी केन्द्रका सद्धाम सिद्धिकी १ सय ७ मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । राप्ती र राजपुर गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ भने गढवा र दंगिशरणमा एमालेले अग्रता लिएको छ ।